अचम्मको रातो केरा, देख्दै अचम्म लाग्ने यो केरा कहाँ पाइन्छ ? छन् कैयौँ फाइदाहरु, कतिपर्छ मूल्य ? – Gazabkonews
अचम्मको रातो केरा, देख्दै अचम्म लाग्ने यो केरा कहाँ पाइन्छ ? छन् कैयौँ फाइदाहरु, कतिपर्छ मूल्य ?
काठमाडौं – प्रकृतिले हामिलाई धेरै अनौठा चिजहरु दिएको छ । ती सबै चिजहरु बारे हामिलाई थाहा पनि हुँदैन ।
हामिले केरा देखेकै छौ र खाएका पनि छौ । केराको रंग हरियो र पहेलो हुने गर्छ । तर के तपाईले रातो रंगको केरा देख्नु भएको छ रु अष्ट्रेलियामा रातो रंगको केरा पाइन्छ ।
अष्ट्रेलियामा उत्पादन हुने यो केरालाई रेड डका पनि भन्ने गरिन्छ । यो केरा अष्ट्रेलियामा मात्र होइन वेस्टइीन्डज, मेक्सिको, जमैका, इक्वाडोर मा पनि लोकप्रिय छ ।
यो केरा विश्वमा नै निर्यात हुने गर्छ । तपाईलाई थाहाँ छ, यो केरा भारतको केरलामा पनि पाइन्छ । केराले मुटु र डायबेटिज रोग भएका मानिसहरुका लागि राम्रो मानिन्छ ।
यसमा भिटामिन सी हुन्छ । १० क्यालोरी हुन्छ । सामान्य तरिकाको स्वाद हुने यो केरा स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक मानिन्छ ।
दुनियाकै अनौठो घडी बाबा मन्दिर, दक्षिणा र फलफुन नभई श्रद्धालुले घडी चढाउने गर्छन्, हेर्नुहोस् यो अचम्मको दृश्य
विश्वका विभिन्न ठाउँमा धेरै अ’नौठा मन्दिरहरु छन् । यस्तै तपाईलाई पत्यार नलाग्ला, यस्तो मन्दिर पनि छ जहाँ श्रद्धालुले फल र फुल होइन घडी चढाउने गर्छन् । काशी विश्व नाथको नगर वारायणीमा रहेको उक्त ब्रह बाबाको मन्दिरमा श्रद्धालुले गएको ३० वर्षदेखी घडी चढाउदै आएका छन् । श्रद्धालुले मन्दिरमा आउदा घडी चढाउने हुनाले यस मन्दिरलाई घडी बाबा मन्दिर पनि भन्ने गरिन्छ ।
एक मानिसले ट्रक ड्राइभर बन्न मन लागेको भन्दै मन्दिरमा वर मागेपछि संयोगले उ ट्रक ड्राइभर भए पछि उनले घडी चढाए । यो कुरा सबैले थाहा पाएपछि बिस्तारै सबैले घडी चढाउन थाले । घडी चढाउदा ब्रह बाबाले मनोकामना पुरा गर्ने विश्वासले अहिले पनि यस मन्दिरमा घडि चढाउने गर्छन् ।
यो सबैलाई थाहा भएप छि बिस्तारै बिस्तारै घडी चढाउदा ब्रह बाबाले मनो कामना पुरा गर्ने विश्वास गर्दै घडी चढाउने परम्परा शुरु भएको हो । यो मन्दिरमा दैनिक टाढा टाढाबाट श्रद्धालु दर्शन गर्न आउने र घडी चढाउने गर्छन । धेरैले त मन्दिरको बाहिर रुखमा पनि घडी चढाउने गर्छन । घडी बाहिरै भएपनि आजसम्म एउटा पनि हराएको छैन ।
कुलमानलाई निकालेर केपी ओलीले गल्ती गरे, झ्यापझ्याप बत्ती निभाएर लोडसेडिङ निम्त्याएर बत्ती र ब्याट्रीको ब्यापार गर्ने ओलीका मान्छेको यस्तो खेल, प्रचण्डको रिस जनतालाई साँध्न पाइन्छ ?
मात्र पाँच वर्षअगाडि फर्केर हेरौं, दैनिक १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङमा बाँच्नुपर्दाका दिनहरु अहिले एकादेशको कथा झैं लाग्छन् । बिजुली एउटा दुर्लभ र बहुमूल्य चीजजस्तो लाग्थ्यो । जतिबेला देश अत्याशलाग्दो अन्धकारभित्र पिल्सिएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मुख्य काम थियो, लोडसेडिङको तालिका प्रकाशित गर्ने र त्यसलाई नियमित अध्यावधिक गर्ने । त्यही तालिका आम नेपालीका घर र कोठामा हुन्थे ।
तर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा जब कुलमान आए, अवस्था फेरियो । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङले सम्हाले लगत्तै उनको कुशल व्यवस्थापन र नेतृत्वमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो । वर्षौंदेखि लोडसेडिङको मार खेप्दै अँध्यारोको सामना गर्दै आएका आम सर्वसाधारणको उज्यालो युग भेटे ।
नेपाली समाजले बिजुलीको अर्को नयाँ पर्यायवाची शब्द पनि बनाएको छ । त्यो शब्द हो कुलमान । त्यसैको खुसीयालीमा आम सर्वसाधरणले बिजुलीको पर्यायवाची नाम कुलमान मात्र राखेनन्, बत्ती आउँदा कुलमान आए र जाँदा गएसम्म भन्न थालियो । कतिपयले आफ्नो घर अगाडिको बाटो, चोकको नाम पनि कुलमान घिसिङको नामबाट राखे । नेपालीलाई अन्धकार दिने त्यो लोडसेडिङ अन्त्यको सुरुवात दिन लक्ष्मीपूजा तथा दीपावलीको दिन थियो ।
तर चार वर्षको सफल र ऐतिहासिक कार्यकाल सकेर कुलमान बाहिरिए । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानको पुनर्नियुक्त हुन सकेनन् । कार्यकाल सकिएपछि सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोर्होयाएन । अथवा गरिएन । प्राधिकरणमा ठूलो परिवर्तन ल्याएका घिसिङलाई पाखा लगाइयो ।
पछिल्लो केही दिनदेखि अघोषित रुपमा बिजुली गइरहेको छ । यसले उपभोक्तामा पुनः लोडसेडिङ फर्किने त्रास बढेको छ । प्राधिकरणले पूर्वसूचना नै नदिई बत्ती काटिदिँदा उपभोक्तामाझ शंका बढेको छ। शंका बलियो हुनुको अर्को कारण हो, कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको पदावधि नथपिनु र ऊर्जा मन्त्रालयमा टोपबहादुर रायमाझीको पुनरागमन। रायमाझीको ऊर्जा मन्त्रालयबाट बहिर्गमनसँगैको संयोग थियो मुलुक लोडसेडिङमुक्त घोषणा हुनु।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिए। यसै साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रायमाझीलाई ल्याए। बिजुली बारम्बार झ्यापझ्याप काटिन थाल्यो। बेला न कुबेला बत्ती गइरहन्छ । कहिले जाने कहिले आउने अत्तोपत्तो हुँदैन ।
कतिपय ठाउँमा सूचना नै जारी गरेर विद्युत काट्न थालिएको छ । प्राधिकरणले घुमाउरो पाराले लोड व्यवस्थापन गर्न भन्दै ललितपुरका विभिन्न स्थानमा विद्युत कटौतीका लागि सूचनानै प्रकाशित गरेको छ । काठमाडौ बानेश्वरको लोड व्यवस्थापन गर्न ललितपुरका चापागाउँ, हरिसिद्धि, र खुमलटारस्थित रेडियो नेपाल फिडर १ देखि ३ घण्टा सम्म बन्द गर्न सूचना निकालिएको हो ।
दैनिक विना सूचना झ्यापझ्याप बत्ती गइरहेको भए पनि प्राधिकरण भने यसलाई मान्न तयार छैन । यसले लोडसेडिङ नभएको दाबी गदैृ आएको छ । यो समस्या विशुद्ध प्राविधिक भएको दाबी प्राधिकरणको छ। विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या अघिल्ला वर्षहरूमा पनि हुने गरेकाले लोडसेडिङ होला कि भन्नु मनोवैज्ञानिक त्रास मात्रै भएको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको टिप्पणी छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कुल ऊर्जा माग बढे पनि विद्युत् प्रणालीमा कुनै समस्या नरहेको उनको दाबी छ । प्राधिकरणको यस्तो प्रष्टीकरण सर्वसाधारण भने मान्न तयार छैनन् ।
देशमा ऊर्जाको माग बढेसँगै भारतबाट आयातित विद्युत्मा परनिर्भरता पनि बढेको छ। गत वर्ष पुस १२ गते भारतबाट कुल ४ सय ७१ मेगावाट विद्युत् आयात भएकामा यो वर्ष सोही दिन आयात बढेर ६ सय ३२ मेगावाट पुगेको छ । गत वर्ष पुस १२ गते भारतबाट ८० लाख युनिट आयात भएकामा यो वर्षको सोही दिन यो परिमाण बढेर १ करोड १० लाख युनिट पुगेको छ।
तराई क्षेत्रमा यसपालि एकाएक विद्युत्को माग बढेको छ । तराईमा मात्रै सय मेगावाट लोड बढेको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा घटेको छ । तराईमा माग बढेपछि प्राधिकरणले भारतबाट थप सय मेगावाटै बिजुली आयात गरेको छ ।
के भन्छन् कुलमान ?
तर प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि अहिले नियतवश लोडशेडिङ गराउने योजनाले बत्ती गएको मान्न तयार छैनन् । केही दिनअघि बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले अनुभूति आफूले पनि गरेको भए पनि नियतवश लोडशेडिङ गराउने योजना भने नभएको बताएका छन् ।
त्यसोभए अहिले किन बत्ती पटकपटक गइरहेको होला त? बीबीसीसँग उनले भनेका छन् यसका दुई–तीनवटा कारण हुनुपर्छ । एक त समस्याहरू निरन्तर आइरहन्छन् तर तिनको द्रुत गतिमा सम्बोधन भइरहनुपर्छ । अर्को माग र आपूर्तिबीच पनि निरन्तर सन्तुलन मिलाइराख्नुपर्छ ।’
प्राधिकरणको विज्ञप्ती : लोडसेडिङ्ग नहुने
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुनै पनि प्रकारका लोडसेडिङ नहुने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले बिहीबार विज्ञप्ति नै निकालेर नेपालमा अघोषित रूपमा लोडसेडिङ भएको भनी सञ्चारमाध्यममा छापिएका समाचारमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले ३ वर्षअघि नै नेपाल लोडसेडिङमुक्त भइसकेको उल्लेख गर्दै फेरि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नआएको पनि स्पष्ट पारेको छ । केटिएमदैनिकबाट साभार